Mapepa Ndege - Ikkaro
kudzidziswa >> Origami kana origami >> Mapepa Mapurani
Chikamu chekutaura nezvacho mapepa Mapepa. Kuvaka, mafomu ekubhururuka, zvinongedzo, zvirongwa, nezvimwe
Sezvo isu taive vadiki vanotidhonzera tarisiro. tinotora pepa tinoripeta nemaoko edu uye kamwe kamwe rava ndege uyewo Nhunzi! Pangangodaro pasina chimwe chinhu chinoshanda uye chinoshanda mu origami kupenya mwana.
Takatanga nemhando dzekare, idzo isu tese dzinoziva kugadzira uye munguva pfupi tinoda zvimwe, uye isu takatanga kutsvaga mhando dzakasiyana dzendege dzendege, idzo dzinobhururuka zvakanyanya, idzo dzinokurumidza kugadzira, nezvimwe , nezvimwe.
Uye muchikamu chino ini ndichataura nezveese aya ndege, kubva kune imwe inobhururuka zvakanakisa, kune iyo yakanakisa kubhururuka. maitiro ekugadzira ndege nhanho nhanho uye mimwe mibvunzo inonakidza inoenderana nenyika yeOrigami uye kugadzirwa kwemapepa ndege ndege. Waizviziva here kuti kune simulators dzendege? Zvakadii nemakwikwi enguva yekufamba nendege? Ndeapi michina inogadzira ndege yega uye nekuimutsa? Ungade here kuvaka yako wega pepa ndege indaneti?
Zvakanaka, ndizvo zvandiri kuita. Chero mazano aunayo anogara achigamuchirwa.
Ini ndinokusiira iwe nedzidziso dzekugadzira Mapepa Ndege. Uye kana iwe uri wekutanga origami tarisa chikamu chedu
Pasi rose zvinyorwa nemapepa ndege
Isu tinosiya mavhidhiyo maviri ane zvinyorwa zvepasirese nemapepa ndege gore rino.
Kune rimwe ruoko isu tine iyo refu ndege, ine 27,9 masekondi.
Uye kune rimwe divi, makwikwi ekuda kuziva andisati ndamboona. Rekodhi repasi rose ndege yendege yakasungirwa kukamuti Kunyatsoda kuziva, ini handizive chinhambwe chaunofanira kuisa cube kuitira kana iwe uchida kudzidzira uye kuzvizivisa pachako, asi ini ndichaferefeta.
Kunyatsoda kuziva nezve cube, ndinofanira kuyedza izvi, hehehe
Zvese izvi takaona mukati Oriplane
Iyo DC-03 yakanakisa pepa glider mupasi
Isu tinopa iyo DC-03 Pepa Ndege kufunga ndege yakanakisa yepasi pasi.
Asi zvirokwazvo, seyakanakisa, yakaipa kana yakanaka iine hukama, zvinoenderana nechinangwa chatinotevera, ndinoda kutaura kuti ndizvo iro rakanakisa pepa glider mupasi. Zvakanaka, mundima iyi zvinoita sekunge haina mukwikwidzi.